မြန်သထက် မြန်လာပီ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နဂါးကြီး ထွက်လာရတော့မယ် WW3 စိန်ခေါ်သံ – Let Pan Daily
အဖြစ်ကတော့မနေ့ကနှင့်မတူဆိုသလိုပေါ့ဗျာ.တစ်ရက်ထက် တင်းမာလာနေကြပီဆိုပါတော့… ခန့်မှန်းခြေအရတော့.နဂါးကြီးဟာ…. သိပ်မကြာခင်အိပ်ယာဝင်တော့မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်….
Weapons of the world .သတင်းကတော့ တက်လာနေပီ….. တရုတ်ကြီးဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား သူ့ရဲ့ရေပိုင်နက်ထဲကို​​တော့ဆင်းသက်လို့လာနေပါပီ..ထိုင်ဝမ်ကိုလည်းစိန်ခေါ်လိုက်သေးတယ်လို့သတင်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်ဗျ.
အမေရိကန်ကဝင်ကူဖို့အဆင်သင့်ဆိုတဲ့အနေအထား ပြောပြထားသေးတယ်…. Ag 23ရက်နေ့ကအမေရိကန်နှင့်လည်း အနီးကပ်တွေ့ဆုံမူ့မျိုးရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ထိုင်ဝမ်100F.16ကဝင်ရောက်ကူညီရန်အသင့်အနေအထားပျံသန်းသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြန်တယ်…
. တိုက်ပွဲကတော့စစ်အေးဖြစ်နေတုန်းပေါ့ မပြစ်ကြ မခတ်ကြသေးဘူး… အဲဒီမှာဘဲအမေရိကန်လေတပ်ဟာတရုတ်ပိုင်အနက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့သေးတယ်လို့သတင်းမှာပါလာခဲ့တယ်
.(အမြင့်ဆုံးတင်းမာမူ့) ဖိလစ်ပိုင်ကိုတော့Aug.24ရက်နေ့က အာရှစစ်ဘီးလူးကြီးဂျပန်ရဲ့ နည်းပညာ လေကြောင်းရေဒါကာကွယ်ရေးဒုံးကာစနစ်တွေချထားလိုက်ပီလို့.ဖိလစ်ပိုင် Breaking new သတင်းတစ်ခုကဖော်ပြထားပြန်တယ်….
ရှီကျင်းဖျင်ကြီးသူ့နိူင်ငံမှာ ပြည်သူတွေရှေ့စိုက်ပျိူးရေးဘဲဦးစားပေးလုပ်နေသ လိုလို.မြွေးမြူရေးကိုဘဲ အဓိကထားလုပ်ဆောင်ရမယ်ပြောကြားနေသလိုလို.အပြောင်စားစနစ်ကျင့်သုံးရမယ်လို့နိူင်ငံအတွင်းစည်းကမ်းလေးပေးနေသလိုလိုလုပ်ပြနေတယ်.
တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့နိဂုံးအရေးဘဲလေ သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုက်ရောက် လာရင်တော့သူသူငှာငှာလမ်းစတော့ရှာကြမှာမလွဲမသွယ်ပါဘဲ…. သူလည်းနာမည်တစ်လုံးနှင့်ရပ်တည်လာတာကြာခဲ့ပေါ့…
မကြာခင်တော့WW3စစ်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာအတိအကျမြင်လာရပီပေါ့ စောင့်နေ ခဲ့တာလည်းကြာပီ……
ခုမှအချိန်ကျသိပ်ကိုနီးလာနေတယ်…. ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစစ်ကြီးပီးမလဲဆိုတာကိုတွေးမိတယ်.တရုတ်ဆိုတာကလည်း အချိန်ယူထားရတဲ့အတွှက်အဆင့်သင့်ဖြစ်နေမှာဘဲ.အမေရိကန်နှင့်မဟာမိတ်တွေကလည်းဟုန်းဒိုင်းကြဲဝိုင်းသမဆွဲကြလိမ့်မယ်…. အစကတော့သိပ်မကြာ…
အမေရိကန်နှင့်မဟာမိတ်တွေမှာလည်း ပြင်ဆင်ချိန်ကြာကြာယူထားတယ်….. အဲဒီတော့ခတ်အေးအေးပြီးသွားမဲ့စစ်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူး……
အသေကြမ်းအသေရမ်းဆိုတဲ့စစ်ပွဲအ သွှင်ကိုဆောင်မဲ့စစ်ပွဲမျိူးပါ.သူပြစ်ကိုယ်ပြစ်.မဆုတ်မနှစ်ထုကြလိမ့်မယ် ရေပြင်ကလည်းတဂျိမ်းဂျိမ်း.ဝေဟင်ကလည်းတစ်ဒုန်းဒုန်း.မြေပြင်ကလည်း..
တစ်ဗုံးဗုံးဆိုတဲ့အတိုင်းသူပြိုင်ကိုယ်ပြိုင်အားချင်းဆိုင်ကြပါလိမ့်မယ်….. ရုပ်ရှင်ကားထဲကအတိုင်းနေရာတိုင်းမှာ ဗုံးမိုးရွာကြလိမ့်မဲ့စစ်ပွဲမျိူးအနေအထားဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ပီလို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်ဗျ…..
ခဏဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်ဘဲဖြစ်ဖြစ်စတိုက်ပီဆိုတာနှင့်ကောင်းကင်ယံတစ်ခုလုံး ဒုံးကျည်တွေရဲ့အုပ်မိုးထားမူ့ကြောင့်နေလုံးကြီးတောင်မှောင်သွားမလား… စစ်ပွဲရဲ့ကြမ်းတန်းမူ့ကခန့်မှန်းရခက်လောက်အောင်ကိုကြီးမားသွားပါလိမ့်မယ်.
ဒါဘယ်မဲ့အချိန်ကတော့တိုတောင်းပါလိမ့်မယ်တော့ထင်ပါတယ်… တစ်ဘက်တစ်ဘက် ကိုတော့အကျအဆုံးလည်းများသွားနိူင်တဲ့စစ်ပွဲ ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိူင်ပါတယ်….
တရုတ်ကြီးဟာကျဆုံးတော့မှာ.သူပြောတဲ့စကားနားယောင်လို့တော င်အမှားမလုပ်မိစေနှင့်.အခုလုပ်ဆောင်သွားမှာက တရုတ်မက.သူရဲ့လက်တံတွေ.သွေးကြောတွေကိုအပီးဖြတ်ထုတ် ပြစ်ခဲ့ပီးမှပြန်ကြလိမ့်မယ်…..
ဘုမသိဘမသိမြောက်ပေးတိုင်းလုပ်နေရင်တော့လင်းယုန်ကြီးရဲ့အပြန်ခရိး Ronald Reagan(CVN.76)ကြီးစီးပီးပါသွားလိမ့်မယ်ဗျ…..
ဒါကြောင့်တော့.လင်းယုန်ကြီးနှင့်အတူ မဟာမိတ်တပ်သားတွေအမှန်တရားက ကယ်တင်ပေးပါစေလို့ဘဲဆုတောင်းရင်း WW3စစ်ပွဲခေါ်သံမနက်ဖန်လားဆိုတာ နေ့စဉ်အမျှစောင့်ကြည့်နေကြပါပီလို့ရေးသားရင်း.စစ်ပွဲသတင်းလေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာ.
ရှေ့ဆောင် လမ်းပြကောင်း ပီသလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ် ကြောင့် ပြည်သူ့မေတ္တာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ စည်ပင် အရာရှိ
မီးစာ တစ်ဖက်၊ ရေမှုတ်တစ်ဖက် နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ရဲ့ အချည်အိုးတည် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ